Ny tetik'asa Carbon Blue sy ny fandaharan'asa dia azo alaina amin'ny alalan'ny rafitra isan-karazany (ohatra, jereo ref ). Afaka mahazo fanohanana ara-bola mifandraika amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny rafitra ara-bola mifandraika amin'ny fahasamihafan'ny biôgrafika izy ireo, toy ny alàlan'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny fikorontanan'ny toetrandro (UNFCCC), Fifanarahana momba ny fahasamihafan'ny biolojika (CBD), na Ramsar.
Banky famatsiam-bola sy fampandrosoana ho an'ny governemanta
Ao amin'ny UNFCCC, ny fanamafisana ny karbaona manga sy ny fampifanarahana dia azo alaina amin'ny alalan'ireo vola mifandraika amin'ny tontolom-bolany: ny Tahirim-bolan'ny Global Environment Facility sy ny faritra misy azy, ny Tahirim-bola miaro ny Toetrandro ary ny Tahiry Lany ho an'ny firenena. Ny Fundamental Fund of Climate and the misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAdaptation Fund dia safidy hafa amin'ny fanatanterahana ny tetikasa karbaona manga. Ankoatra izany, ny tetikasa karbaona manga dia mety ho azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny banky fampandrosoana ny fiovaovan'ny toetr'andro (oh: misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAfrican ary misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAsian Banky Fampandrosoana, Banky Fampandrosoana Amerikana, ary ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBioCarbon Fund amin'ny maha-mpikambana ao amin'ny Banky Iraisam-pirenenan'ny Banky Iraisam-pirenen'ny Banky Mondialy).
Ankoatra ny fananganana ny toetr'andro dia azo ampiasaina koa ny rafitra famatsiam-bola momba ny fitantanam-bary mba hanohanana ny fiarovana sy famerenana ny tontolo iainana marefo karbaona (ohatra ny Fikambanana Global Environment izay manohana ny Fifanarahana momba ny fahasamihafana eo amin'ny biolojika sy ny vola fanampiana maro misokatra amin'ny varavarankely vaovaoRamsar: Toe-karena ho an'ny Tahiry Fandrosoana hoavy ho avy, Fonds Suisse Fonds, ary ny Tahirim-bolan'ny Nagao Wetland. ref
Ny firafitry ny karazana biodiversité sy ny volan'ny karbôna dia afaka mampiasa loharano fanampiny ho an'ny hetsika miaraka amin'ny toe-javatra mandresy amin'ny fandrosoana sy ny fandrindrana ny fiovan'ny toetr'andro.
Ny toetr'andro momba ny haavon'ny haavo (maitso maitso) sy ny rafitra famatsiam-bola amin'ny sehatry ny fahasamihafan'ny biodiversité (maitso maitso) izay manan-danja amin'ny tetikasa karbôna manga. Loharano: Herr et al. 2014
Fivarotana karbona voafetra sy an-tsitrapo
Ny tontolon'ny karba dia manome loharanom-bola manan-danja hanohanana ny fiarovana sy ny famerenana ny fiarovana ny tontolo iaianana manga. Ny tsenan'ny karba dia mifototra amin'ny hevitra hoe azo arovana ny fivarotam-piaramanidina ary azo amidy ho fanomezan-dàlana izay ampiasain'ny mpividy mba hananganana ny entona (izany hoe ny varotra ivelany). Ireo karbaona karba dia voamarina ary avy eo dia amidy amin'ny tsenan'ny fanarahan-dalàna na tsena an-tsitrapo.
Ny tsenam-bola karbaona an-tsokosoko dia manome fahafahana ny orinasam-panjakana, ny governemanta, ny ONG ary ny olona hanaparitaka ny fivoahany amin'ny alàlan'ny fividianana ny famerenana an-tsokosoko an-tsitrapo ary amin'ny toe-javatra sasany, dia manolotra tombotsoa ara-tsosialy ihany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny orinasa dia mety hahazo fahazoan-dàlana karbôna ho tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny fandefasana azy ireo amin'ny fifanakalozana vola amin'ny fiarovana / famerenana ny tontolo voajanahary manga.
Ireo rafitra mahazatra dia ahitana fihenam-bidy amin'ny alàlan'ny famongorana ny ala (REDD +) sy ny hetsika nasionaly mifanaraka amin'ny firenena (NAMAs) ho an'ny firenena an-dalam-pandrosoana mba hahazoana fidiram-bola amin'ny famatsiam-bola iraisam-pirenena sy ny fampiharana ny programa sy ny politikam-pirenena. Azo ampiasaina amin'ny mizana eo an-toerana ny fomba fiasa fanadiovana madio (CDMs) sy ny tsenan-tsolika an-tsitrapo mba hanohanana ny fanamafisana ny fikorontanan'ny toetrandro, anisan'izany ny fiarovana ny tontolo iainana manga.
Ny fanavaozana ny trosa ao Seychelles dia hanome vola hanohanana ny fampifanarahana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fitantanana ny faritra, haran-dranomasina ary ala honko. Sary: Jason Houston
Na izany aza, ny fitantanam-bola karana irery dia mety tsy ampy hanohanana ny fiarovana ny ekosy karbonika manga, noho izany dia zava-dehibe ny mandinika karazana safidy famatsiam-bola izay mifameno amin'ny hetsika karbonina miaraka amin'ny loharanom-bola tsy miankina amin'ny karbon (ohatra: Payment for Ecosystem Services sy ny trosa- miovaova toetra ref).
Fanomezana sy asa soa manokana - iray amin'ireo fomba mora entina mamatsy vola ny asan'ny karbonina manga
Ny rafitra ara-bola fanovozam-bola dia afaka manome fahafahana hahazo endrika vaovao ara-bola na fidiram-bola fanampiny ho an'ny fiarovana. Ohatra amin'izany ny:
Ny fandoavam-bola amin'ny serivisy momba ny tontolo iainana - ampiasao tsena mivantana handraisana vola amin'ny hetsika manokana
Fampiroboroboana vokatra sy tsena "maitso"
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoBlue bonds
Fampiasana fitaovana fandefasana risika sy fiantohana fiantohana sy fihetsika fanalefahana toy ny fividianana biodiversity ampiasain'ny orinasa mampiasa andraikitra ara-tsosialy
Nisolo-tena ny trosa ref ary ny fandrindrana ny karbônina dia azo raisina ho tanjona fanampiny ho an'ny hetsika tetikasa vatsy ao anatin'ireny karazan'entana ireny. ref
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanampim-bola ho an'ny Carbon Blue: Ny fahafahana sy ny lesona avy amin'ny traikefa REDD +manokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAlao maina na sira izy io: Torolàlana fanolorana ho an'ny fandaharan'asa fitrandrahana karbaona sy tetik'asamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFiarovana ny hazan-dranomasina amin'ny alàlan'ny fandoavana vola ho an'ny serivisy ekosystem: Torolàlana ho an'ny vondron'olona - Ity torolàlana azo alaina ity dia hita amin'ny teny anglisy, frantsay ary espaniola